၎င်းသည် OS X El Capitan တွင် Disk Utility အသစ်ဖြစ်သည် ငါက Mac ပါ
၎င်းသည် OS X El Capitan ရှိ Disk Utility အသစ်ဖြစ်သည်
OS X El Capitan စနစ်အသစ်သည်အင်အားနှင့်အတူ၎င်း၏လည်ပတ်မှု၏အချို့သောရှုထောင့်များတွင်များစွာသောပြုပြင်မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုမှာ Disk Utility tool ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပြီး OS X ဗားရှင်းအတော်များများအပြီး Cupertino ကဲ့သို့ အသုံးပြုသူသည်ကွန်ပျူတာ၏ hard drive နှင့်အပြန်အလှန်ပြုမူပုံကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
သင်သိထားပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ disk utility tool သည် Launchpad> Other folder> တွင်တည်ရှိသည် Disk Utility ကျွန်ုပ်တို့ Hard Drive တွင်ရှိသည့်အခန်းကန့်များကိုစီမံရန်အသုံးပြုသည် သိုမဟုတ်ပြင်ပ drive များ (သို့) pendrives များကိုဖိုင်စနစ်အမျိုးမျိုး၌ format လုပ်ရန်။
ဒီကိရိယာအသစ်မှာကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရတဲ့သတင်းကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်၊ ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကအဲဒါကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲဒါကိုကျွန်ုပ်တို့က Launchpad> အခြားသူများ> Disk Utility သို့မဟုတ်ကနေ Spotlight ကို ထိပ်မီနူးဘား၌တည်၏။
အဟောင်းကို Disk Utility ကိုပြတင်းပေါက်
အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားသည့် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဘယ်ဘက်ရှိကော်လံ၌ကွန်ပျူတာရှိကျွန်ုပ်တို့ volumes များပေါ်လာမည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အတွင်းပိုင်း hard drive ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အခြားဒေတာသိုလှောင်ရေးကိရိယာအပြင်
၀ င်းဒိုး၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်ဘက်ကော်လံတွင်ရွေးချယ်ထားသော volume နှင့်သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်ရှိသည်။ ပြတင်းပေါက်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုနားလည်နိုင်မှာပါ ၎င်းသည်အရွယ်အစားလျှော့ချပြီးအသုံးပြုသောဂရပ်ဖစ်များသည်အသစ်ဖြစ်သည်။
၀ င်းဒိုး၏ထိပ်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အဓိကအသံအတိုးအကျယ်ကို၎င်း၊ ၎င်းတွင်ပြုလုပ်ထားသောအခန်းကန့်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအပေါ် မူတည်၍ ခလုပ်များဆက်တိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်ခလုတ်များမှာ
Disk Utility tool အသစ်နှင့်ပထမဆုံးဆက်သွယ်မှုကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်ရရှိနိုင်သည့် disk space နှင့်ဖိုင်များ၏မတူညီသောနေရာများနှင့်သူတို့၏သဘောသဘာဝအရမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကို iCloud စတိုင် bar သို့ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပြောဆိုပါ (အက်ပ်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံများ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့်အခြားအရာများ).
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » ၎င်းသည် OS X El Capitan ရှိ Disk Utility အသစ်ဖြစ်သည်
ကောင်းပြီ၊ ပုံရိပ်တွေမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်း hard drive နဲ့ငါ့ဆီမှာကျွန်တော်ဟာ ၆၇.၅၉ Gigs အခမဲ့ရှိပြီးအက်ပလီကေးရှင်းများကသိမ်းယူပြီးနောက် ၈၃.၁၆ Gigs အခမဲ့ရှိသည်။ ငါက operating system ကိုအမှားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဆကြသည်။
ဗစ်စီယပ်စ်နှင့်ရောဘတ်၊ မင်းမှာမင်းရှာချင်တာကို File / New Image menu bar မှာမင်းထင်တယ်။ System လိုသည့်အချိန်တွင်အစားထိုးလိုသောအခါခွင့်ပြုချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် console သို့ပြန်သွားရမည်။ မင်္ဂလာပါ
နင့်နင့်နင့်နင့်နင့်နင့်နင့်နငးင \_ t
တစ်စုံတစ် ဦး က OS X EL CAPITAN တွင်ထည့်သွင်းထားသော NTFS နှင့် pendrive တစ်ခုကိုမည်သို့ format ရမည်ကိုသိသည်မှာဖျက်ပစ်သောအခါ NTFS ၏ရွေးချယ်မှုမဟုတ်တော့ပါ။
Jose Manuel Villalobos Linar ဟုသူကပြောသည်
ယခင်မေးခွန်းကိုထပ်မံပြောကြားသည်။ သင်သည် OS X EL CAPITAN တွင်ထည့်သွင်းထားသော NTFS နှင့် pendrive တစ်ခုကိုမည်သို့ format ရမည်ကိုသင်သိပါသလား။ ပယ်ဖျက်သောအခါ NTFS ရွေးစရာမရှိတော့ပါ။
José Manuel Villalobos Linar အားပြန်ပြောပါ
သူတို့ဟာဒါကိုဆိုးဆိုးရွားရွားလုပ်ခဲ့တာပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။ ဘာမှမအထောက်အပံ့မရှိပါ၊ ၎င်းကိုပြင်ပ NTFS disk များထဲသို့ကူးယူ။ မရပါ။ ယူရို ၁၀၀၀ ကျော်သောကွန်ပျူတာတစ်ခုသည်အပိုပရိုဂရမ်တစ်ခုအတွက်ငွေမသွင်းဘဲမိမိပြင်ပရှိအခြားမည်သည့်ပြင်ပ disk format ကိုလက်မခံပါသနည်း။ နားမလည်နိုင်သည့်၊ မရနိုင်သော။ အလွန်ကောင်းစွာစဉ်းစားစီးပွားရေးကိစ္စ။
အပလီကေးရှင်းအများစုသည်အလုပ်မလုပ်ပါ (လခပေးရသည့်သူများပင်) ။ သူတို့ဟာအသုံးမကျဘူးဆိုတာမယုံနိုင်စရာပါပဲ။
နှစ်စဉ် operating system နှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံအကြောင်းအရာများကိုထပ်မံလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
disk utility ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်၏လွတ်နေရာလွတ်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သူမဆို၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုသိပါသလား။ ဖျက်ပစ်နိုင်သောရွေးစရာများသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ရိုးရှင်းစွာပိတ်ထားပြီး၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်ရှာမတွေ့ပါ။
ယခုပို့စ်တွင်သင် disk disk နေရာ၌ပြaနာရှိနေသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ https://www.soydemac.com/recupera-el-espacio-en-disco-despues-de-instalar-os-x-el-capitan/ မင်းဆိုလိုတာလားငါမသိဘူး
မရလျှင်သင်၏ disk solution သည် "diskutil" ဖြင့်အခမဲ့ disk space ကိုဖျက်ရန် Terminal ကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။
ငါတွေ့မြင်နိုင်သည့်အရာတွင်စီဒီ RW ၏ပါဝင်မှုများကိုလည်းဖျက်သိမ်း။ မရပါ။ ဘာများများစားရမလဲ။
၎င်းသည် Apple ၏စာမျက်နှာကိုဖျက်ပစ်ရန် -“ ပြန်လည်ရေးကူးနိုင်သည့် disc တစ်ခု၏အကြောင်းအရာများကိုဖျက်ရန်၊ Finder sidebar ရှိ CD သို့မဟုတ် DVD drive ကို Ctrl-click နှိပ်၍ လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်မှုမီနူးတွင် 'Erase Disc rewritable "ကိုရွေးချယ်ပါ။
EL CAPITAN ဘေးအန္တရာယ်။ ၎င်းသည် NTFS တွင် format ချခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Windows နှင့် format လုပ်ထားသော disk တစ်ခုကိုထို format ဖြင့် plug လုပ်ပါက၎င်းသည်သင်ရေးရန် (သို့) download လုပ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ အကယ်၍ သင်သည် FAT-32 ကိုအသုံးပြုပါက4GB ကျော်လွန်၍ မရပါ။ အကယ်၍ သင်သည် OS X ကိုအသုံးပြုပါက၊ dot-dash ဖိုင်များကိုထပ်မံကူးယူပါကပြင်ပ drives များကိုတီဗွီသို့မထည့်နိုင်ပါ၊ ကျနော်တို့ကဏန်းကဲ့သို့နောက်ပြန်သွားပါ။
ဝမ်းနည်းခြင်း၏။ ငါအခြား Mac ဝယ်ယူဘူး။ ငါ့ကိုမနှောက်ယှက်ပါနှင့် ntfs hard drive သို့ဘာမှမပေးဘဲမကူးယူနိုင်ပါက? ငါကမယုံကြည်ဘူး !!!! မင်းငါ့ကိုငါ့ကိုမမိုက်တော့ဘူး ငါနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းက iPhone ဝယ်ယူကြပြီမဟုတ်ဒါကတစ်ခုတည်းသော Mac ဖြစ်လိမ့်မည်
ဤဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ Ox el capitan ရှိ discs များ၏အသုံးမ ၀ င်သောအရာဖြစ်သည်
Hugo နဲ့ခင်ဗျားကိုသဘောတူပါတယ်။ Mac (သို့) iPhones တွေ ၀ ယ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး။ operating system အသစ်တော့နည်းနည်းရှိသေးတယ်။ ပြီးတော့ထပ်လေ့လာဖို့အတွက်။ ငါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလည်ပတ်နေတဲ့ operating system များစွာကိုငြီးငွေ့နေပြီ၊ ငြီးငွေ့နေပြီ၊ ငြီးငွေ့နေပြီ၊ မလုပ်နိုင်ဘူး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပေမယ့်မကြာခင်မှာပဲ iPhone နဲ့ Mac ကိုပြောင်းရတော့မယ်။ Mac ကပြproblemsနာတွေကိုစပြီးပေးနေပြီ။ နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုကအပိုပစ္စည်းတွေမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်။ နှင့်အတော်လေးအသစ်သောအရာ ... ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကထွက်ခွာခဲ့တဲ့ Operating System ကိုပြန်သွားဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေပါတယ်။ ပြီးတော့ iPad နဲ့ iPhone တွေနဲ့အတူတူပဲလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလိုမျိုးအရာတွေကိုပြန်သွားပါ။ ငါအရမ်းစိတ်ပျက်မိပါတယ်။ ငါသူတို့ operating system ကိုပေးလိုသောအမည်, ဂရုမစိုက်ပါဘူးယခုကြှနျုပျတို့မှာကပ္ပတိန်ရှိသည်, ပြီးတော့တပ်မှူးနှင့်ဗိုလ်မှူးကြီးလာစသည်တို့စသည်တို့ ...
Tuxera NTFS (http://www.fiuxy.com/mac-y-apple/4190593-tuxera-ntfs-2015-final-mac-os-x.html) က၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း "El Capitan" နဲ့သဟဇာတဖွစျကွောငျးကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါက install လုပ်ထားရှိသည်နှင့်ငါ NTFS မှ pendrive ဖွဲ့စည်းရန်မည်သည့်နည်းလမ်းမမြင်မိပါဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ။
Orlando တွင် Alejandro Valencia Quiroz ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် USB မှတ်ဉာဏ် format ချရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်ပုံရသည်။ သို့သော်၎င်းကိုပြတင်းပေါက်ကွန်ပျူတာ၊ တီဗီသို့မဟုတ်၎င်းမဖတ်နိုင်သည့်မည်သည့်ကစားသမားတွင်မဆိုထည့်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၎င်းသည်အသိအမှတ်မပြုပါ၊ ၎င်းကို DISC INUTILITY တွင်မည်သူသိသနည်း။
Orlando Alejandro Valencia Quiroz အားပြန်ပြောပါ
ငါ mac နှင့်အတူအဘယ်သို့ format နဲ့ငါဥပမာတီဗီမဖတ်ကြဘူး။
FERNANDO GARCIA သို့ပြန်ပြောပါ
200tb disk တခုပေါ်မှာ 1mb partition တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ယခုတွင်သင်သည် 800GB disk ကိုသာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ငါ diskdrill ကိုလွန်သွားလျှင်၎င်းကိုလျှို့ဝှက်အခန်းကန့်တစ်ခုအဖြစ်မြင်သည်။ အဲဒီ 200 mb ပြန်ရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ။
ပါပလော R. Villafuerte ဟုသူကပြောသည်
Disk ပုံတစ်ပုံကိုမီးရှို့နိုင်သလား၊ ပြင်ပ disk သို့ ??? နှင်းလျှောစီးကျွန်ုပ်က Snow Leopard ကို macbook အဟောင်းတွင်တပ်ဆင်လိုသည်။ ၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ သို့သော်ပြင်ပ HDD တွင်ထည့်သွင်းရန်နည်းလမ်းရှာမတွေ့ပါ။
Pablo R. Villafuerte အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီ၊ ဒါကအဓိပ္ပာယ်မဲ့သောအရာနောက်တစ်ခုပါ၊ အခုသင်ဟာ disk တွေပုံတူပွားခြင်းသို့မဟုတ်ကြီးမားသောစွမ်းရည် disk များကို format လုပ်လို့မရပါ။
တစ်စုံတစ် ဦး က "အခြားသူများ" ဖြစ်နိုင်သည့်မည်သည့်ဖိုင်များကို disk utility တွင်ကျွန်ုပ်အားပြောပြနိုင်ပါသလော။ ကျွန်တော့် disk ထဲမှာ 60 GB ကျော်ကျော်သိမ်းထားတယ်။
ဟဲလို OSWALDO၊ ၆၀ ဂရမ်ရှိသူများသည်မှတ်ဥာဏ်ကိုသိုလှောင်နိုင်၊ စုစည်းထားသောဖိုင်များ၊ စသည်တို့ကိုငါရယူနိူင်သည်။ MAC ကို“ CLEAN MY MAC” နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်အားအကြံပြုသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Hard Disk တွင်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများစွာကြား ၀ င်ခဲ့သည်။
Susana quiroz ဟုသူကပြောသည်
'read only' လို့ရေးထားတဲ့ pendrive ကိုငါ format လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ​​အဲဒါကို 'get information' အကွက်ထဲမှာပြောင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ၎င်းကိုပိတ်ထားလျှင် Captain တွင်မည်ကဲ့သို့ format လုပ်နိုင်သနည်း။ သင်၏ကူညီမှုသို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ၏ကျေးဇူးတင်မှုကိုကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားသည်။
Susana Quiroz အားပြန်ပြောပါ
Tuxera NTFS ကိုသုံးပါ။ ဤအရာများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ 😉
မည်သူမဆိုယခု Bootable ဘောပင်ကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။
VocalIQ သည် Voice voice assistant ကို Apple မှရရှိသည်
သင့်ရဲ့ iPhone မှာတေးဂီတရဲ့အသံအရည်အသွေးကိုဘယ်လိုထိန်းညှိမလဲ